वाणिज्य वैँक १७ वर्ष पछि पुर्नस्थापित
माघ १० पर्वत- द्धन्दकालमा असुरक्षाका कारण विस्थापित भएको राष्ट्रिय वाणिज्य वैँकको शाखा १७ वर्षपछि पुर्नस्थापित भएको छ । पर्वतको महाशिला गाँउपालिका वडा नं. ५ लुंखुदेउरालीमा पुनःसञ्चालनमा आएको हो ।
मंगलवार शाखाले औपचारिक कारोवार शुरु गरेको छ । २०३८ सालमा शाखा संचालन भएको बैंक १९ वर्ष सेवा दिएर तत्कालीन माओबादीले चलाएको १० वर्षे द्वन्द्वकालमा असुरक्षाका कारण भन्दै २०५७ सालमा विस्थापित भएको थियो । देशभर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका १ सय शाखाहरु द्वन्द्वकालमा विस्थापित भई सदरमुकाम सरेका थिए । नेपाल सरकारले स्थानीय तहको बजेट राख्नका लागि बाणिज्य बैंकमै खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसारनै द्धन्द्धकालमा बिस्थापीत राष्ट्रिय बाणीज्य बंैकको शाखा पुनः सञ्चालनमा ल्याईएको हो ।
पर्वतका प्रदेशसभा साँसद विकास लम्सालले शाखाको मंगलवार उद्घाटन गर्नुभयो । लम्सालले चेक साटेर बैँकीङ कारोबार शुरु गर्नुभएको थियो । उहाँले अब छिट्टै स्थानीय तहमा पुर्वाधार विस्तार गरी सबै तहमा सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त बैंकहरु सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्ने जनाउनुभएको छ ।
यस शाखा बाट बैँकका अन्य शाखाहरुमा जस्तै सर्वसाधारणले सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा करोबार सुविधा, विप्रेषण सेवा, वचत लगायतका सम्पुर्ण बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सक्ने जनाइएको छ । रष्ट्रिय बाणीज्य बंैकले १७३ वटा स्थानमा बैंकको शाखा खोलीसकेको छ । तर पर्वतमा भने राष्ट्रिय बाणीज्य बंैकको शाखा कुश्मा नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहमा खुल्न सकेको छैन ।
वैँकले गाउँपालीकाको आर्थिक कारोवारमा सहजता ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु पौडेलले वताउनुभयो । वैँक नहुँदा सदरमुकाम धाउनुपर्ने वाध्यता हटेको उहाँले वताउनुभयो । वडा न. ५ का वडाध्यक्ष जीवन उचै ठकुरीले महाशिलाको समृद्धिको आधारका रुपमा वैँक स्थापनालाई लिएको वताउनुभयो । ६ वटा वडा रहेको महाशिला गाउँपालीकावासीहरु पनि वैँक सञ्चालन पछि खुशी भएका छन् ।
महाशिला गाउँपालिकाका पोखरी संरक्षण गरिँदै 680
प्राबिधिक शिक्षा सन्चालनको लागी वडाध्याक्षले खडा गरे अक्षयकोष 163
महाशिलाका कृषकलाई यान्त्रिक हलो 203
वडाध्यक्षले फेसबुक स्टाटसमा अपशब्द लेखेको भन्दै गाउँलेको आपत्ति 1055
महाशिलामा बाँदर नियन्त्रण गर्न ३० लाख बजेट विन्योजन 240
पर्वतको महाशिलामा विद्यार्थीहरुलाई सेनेटरि प्याड बितरण 131
पर्वतको पाखापानी स्वास्थ्यचौकीमा चौबिसै घण्टे प्रसुती सेवा 88
पर्वतको महाशिला सडक सञ्जालले घेरिँदै 247
वाणिज्य वैँक १७ वर्ष पछि पुर्नस्थापित 191
पर्वतको बालाकोट पुर्ण साक्षर घोषणा 135
कर्ममा विश्वास गर्ने शर्मा 636
बैकले गाउँमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेपछि....... 111
गाईपालनवाट बार्षिक १० लाख आम्दानी 128
एनआईसी एसिया बैँकद्धारा स्वास्थ्य सेवा प्रदान 587
द्वन्द्वले विस्थापित बैंक पुन सञ्चालनमा 155
अवकाश पछि माहुरीपालन 180
लघुउद्यम विकास कार्यक्रमको अभिमूखिकरण सम्पन्न 216
फलेवासमा लाइफ इन्स्योरेन्स अभिमुखीकरण 174
मल्लाजका महिलाहरुलाई प्याड बनाउने तालिम 146